Biby goavambe fotsy amin'ny SEO | Martech Zone
White Monster Monsters an'ny SEO
Talata, Jolay 3, 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Mahafinaritra hatrany ny mahita vazivazy vitsivitsy ampiasaina amin'ny infografika sasany. Ary mahafinaritra indrindra ny mahita ireo ao amin'ny indostria manosika fanao SEO tsara. Efa nolazaiko izany SEO maty ary io infographic io dia miresaka an'izany ankolaka. Ny zava-misy dia raha manana sehatra matanjaka ianao izay manolotra araka ny tokony ho izy ny atiny, SEO no ampahany mora amin'ny fampitahana… ny ampahany sarotra dia ny manoratra atiny maharesy lahatra izay hozarain'ny mpihaino anao.
Ity infographic avy amin'ny Smuggecko ity dia manondro ny singa tsirairay… aka monster… ao amin'ny paikadinao SEO sy ny fomba fiasan'izy ireo hiantohana ny atiny tsara araraotina.
Tags: Sary torohayseo infographicseo monstersatroka fotsyfotsy satroka seosatroka fotsy
Inona no mila fantatry ny mpivarotra momba ny HTML5
Maninona ny orinasanao no tsy maintsy mandeha ara-tsosialy
Jolay 3, 2012 amin'ny 12:23 PM
Mahafinaritra ny mahita olona mankafy ity infografika ity. Nahafinaritra ahy ny nanao azy. Misy iray hafa amin'ny làlany mijery ny lafiny ratsy amin'ny SEO.
Jolay 3, 2012 amin'ny 5:06 PM
Miandrandra ny hahita ny ratsy koa! Ataovy azo antoka fa ampio ireo biby goavam-be mivarotra SEO fa tena miverina miverina tsy fantatra amin'ny mpanjifa. Ireny ry zalahy no tena nandoro ahy!
Jolay 3, 2012 amin'ny 7:18 PM
Hamorona infographic misaraka tanteraka aho, mikendry ny hisafidy ny orinasa SEO mety. Fa amin'ny herinandro ho avy io 🙂
20 Septambra 2012 à 10:33
Sarin'ny karazana seo tokana. tena ilaina amiko. asa tsara.